Moments leh saaxiibo 33
Miyuu ka tirsan yahay jaaliyadaha qarsoodiga ah inuu saameyn ku yeesho ciribtirka ama maskaxda ku haya horumarkiisa?
Xubinnimada bulsho qarsoodi ah waxay ka hortageysaa maskaxda ama ka caawisaa horumarkeeda iyada oo loo eegayo dabeecadda iyo horumarinta maskaxda gaarka ah iyo nooca jaaliyadda qarsoodiga ah ee midkani yahay xubin. Dhamaan jaaliyadaha qarsoodiga ah waxaa laga yaabaa in lagu sifeeyo laba madax oo: shakhsiyaadka ay ujeedadoodu tahay inay maskax ahaan iyo maskax ahaan u bartaan maskaxiyan iyo ujeeddooyin ruuxi ah, iyo shayadeeda ay tahay faa'iido muuqaal iyo waxtar. Dadku mararka qaarkood waxay isu soo baxaan waxa loo yaqaana inay noqdaan fasal saddexaad, oo ka kooban jaaliyado kuwaas oo bara kobcinta maskaxeed iyo inay ku doodaan xidhiidhka ruuxa. Waxaa la sheegay in dabeecadaha qariibka ah lagu soo saaro wareegyada iyo fadhiyadooda. Waxay sidoo kale ku andacoonayaan in ay haystaan ​​oo ay awoodaan in ay soo bandhigaan cidda ay u arkaan cidda, faa'iidada jidheed ee dadka kale. Dhammaan kuwan waa inay soo galaan fasalka labaad, sababtoo ah shayadooda waxaa lagu ogaadaa inay yihiin dareen iyo jir ahaan.
Jaaliyadaha qarsoodiga ah ee fasalka koowaad waa tiro yar marka loo eego fasalka labaad; oo ka mid ah kuwan yar oo kaliya boqolkiiba yartahay waxay dhab ahaantii ku caawiyaan maskaxda horumarka ruuxiga ah. Qeybtan koowaad waxay ku jirtaa bulshooyinka diinta oo isku daya inay ka caawiyaan xubnahooda kuhadalka ruuxiga ah iyo soo bandhigid-kuwaas oo aan lahayn shayadaas sida tababarka siyaasadeed ama tababbar milatari ama tababarka hababka ganacsiga-iyo sidoo kale ururada falsafada iyo diinta. Kuwa ka mid ah diimaha gaarka ah waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​bulshada oo qarsoodi ah oo ku jirta rumaysadkaas haddii sheyga bulshada aysan u ogolaan in maskaxda lagu hayo mugdi iyo ka horjoogsanin aqoonta. Ka hor intaan mid ka mid ah rumaysad kasta ku biiraan bulshada qarsoodi ah ee uu iimaankiisa waa inuu si fiican u baaraa sheyga iyo hababka. Waxaa jira bulshooyin badan oo qarsoodi ah oo ku dhex jira diimaha kala duwan. Qaar ka mid ah bulshooyinka qarsoodiga ahi waxay xubnahooda ka dhigaan jaahilnimada aqoonta nolosha, waxayna ku dhaleecaynayaan xubnahooda diimaha kale. Bulshooyinka qarsoodiga ah waxay waxyeello weyn u geysan karaan maskaxda xubnahooda. Tababarka noocan oo kale ah iyo jaahwareerka jaahwareerka ah ayaa sidaas oo kale u noqon kara waraaqaha, dulqaadka iyo dariiqa maskaxda ku haysa in ay u baahan tahay nolol badan oo xanuunka iyo murugo ah si loo saxo qaladaadka kuwaas oo laga yaabo inay horseed u galaan. Kuwa haysta xukuno diineed oo ku saabsan diinta, waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​bulsho qarsoodi ah diintaas haddii sheyga iyo hababka bulshadaas ay la kulmaan ogolaansho maskaxdan, iyo inta laga gaarayo maskaxda gaarka ah waxaa lagu barayaa diinta gaarka ah. Diimaha dunida waxay matalaan dugsiyo kala duwan oo maskax ahaan loo barto ama loo barto horumarinta ruuxiga ah. Marka qofku dareemo in diintu ay ku qanacsan tahay dareenka ruuxiga ah ee maskaxdiisa, waxa uu ka tirsan yahay fasalka nolosha ruuxiga ah ee diintu u taagan tahay. Marka diintu aysan bixin wax badan oo la yiraahdo cuntada ruuxiga ah ee maskaxda ku jirta, ama marka uu qofku bilaabayo inuu su'aal ka keeno "runta" diintiisa, waa calaamad muujinaysa in uusan mar dambe ka tirsaneyn ama uu ka soocayo . Haddii uu shaki ku jiro, haddii uu ku qanacsan yahay oo uu ka soo horjeedo barashada diintiisa iyada oo aan loo haysan sababo kale oo aan ahayn niyad xumo iyo jaahilnimo, taasi waa calaamad muujinaysa inuu maskaxdiisa ku xiran yahay iftiinka ruuxa iyo korniinka iyo inuu hoos uga dhacayo fasalka nolosha ruuxiga. Dhinaca kale, haddii maskaxdu dareemayso in diintiisa ama diintiisa uu ku dhashay uu yahay mid cidhiidhi ah oo gaabinaya oo haddii aanuu ku qancin ama ka jawaabin su'aalaha noloshiisa oo maskaxdiisa uu ogaanayo, tani waa calaamad muujinaysa Maskaxdu way sii socotaa oo sii korodhaysaa fasalkaas oo diin ka ah diinta gaar ahaaneed, taasina waxay muujinaysaa in maskaxdiisa uu ka rabo waxyaabo bixinaya cuntada maskaxda iyo ruuxa ay u baahan tahay koritaanka sii socota. Dhammaan jaaliyadaha qarsoodiga ah ee fasalka kowaad, oo leh shaybaarkooda horumarinta dareenka maskaxeed, waxay maskaxdayda maskaxdayda sababtoo ah dhammaan waxyaabaha dabeecadda maskaxdu waa inay sameeyaan dareenka oo ay maskaxiyan hoos ugu dhigaan xukunka dareenka.
Jaaliyadaha qarsoodiga ah ee fasalka labaad waxay ka kooban yihiin ururadaas kuwaas oo sheygooda ay yihiin helitaanka faa'idooyin siyaasadeed, bulsho, maaliyadeed iyo kuwo kaleba. Qeybtan ayaa ka imanaysa mabaadii'da iyo jaaliyadaha deeq-bixiyeyaasha ah, kuwa si qarsoodi ah loo abaabulay inay ku afduubaan dawlad, ama kuwa isu soo ururiya ujeedooyin cagajugleyn, dil ama dareen diidmo oo qarsoodi ah. Mid ka mid ah ayaa si fudud u sheegi kara haddii midkoodna mid ka caawin doono ama dib u ceshan karo horumarinta maskaxdiisa haddii uu ogyahay ujeedooyinka iyo waxyaabaha.
Fikradda sir haynta waa ogaanshaha ama haysashada wax aysan dadka kale haysan, ama la wadaagin aqoon yar. Doonista aqoontani waa mid xoog badan, waana mid soo jiidasho leh oo aan fiicnayn, dhalinyarada iyo maskaxda sii kordhaysa. Tani waxay muujineysaa rabitaanka dadka ay tahay in ay ka mid yahiin wax gaar ah oo adag in ay soo galaan, taas oo soo jiidi doonta xishoodka ama xaasidnimada ama ka cabsashada kuwa aan laheyn. Xitaa carruurtu waxay jecelyihiin inay sirta leeyihiin. Gabadh yar ayaa ku xiran doonta xargaha timaheeda ama midabkeeda si ay u muujiso inay qarsoodi tahay. Waxay tahay sheyga xaasidnimo iyo jacaylka gabdhaha kale ee yar yar ilaa qarsoodi loo yaqaan, ka dibna qarsoodi iyo qarsoodi ayaa lumisa qiimaha. Kadib gabadh kale oo yar oo kale oo qarsoodi ah iyo qarsoodi cusub ayaa ah xarunta soo jiidashada. Marka laga reebo siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshooyinka danbiilayaasha ah, qarsoodiga qarsoodiga qarsoodiga ah ee dunidu, waxay leeyihiin qiimo yar ama ay muhiim u yihiin qarsoodiga gabadha yar. Hase yeeshee, kuwa iyaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku ciyaaraan "ciyaar," taas oo ah faa'iido u leh sida galka qarsoodiga ah ay u tahay. Marka maskaxdu ay kor u qaaddo mar dambe ma rabto sirta; waxay ogtahay in kuwa doonaya sirta ay yihiin kuwo aan qaangaadhin, ama fekerkooda iyo shuqulladoodu waxay raadiyaan madow si looga fogaado iftiinka. Maskax ahaan baaxadiisu waxay jecel yihiin in ay fidiyaan faafinta aqoonta, inkasta oo uu ogyahay in aqoonta aan la siin karin dadka oo dhan. Maaddaama tartanka uu ku soo baxayo aqoonta, baahida loo qabo bulshooyinka qarsoodiga ah ee horumarinta maskaxdu waa inay yareeyaan. Bulshooyinka qarsoodiga ah lagama maarmaan u ah horumarinta maskaxda ka baxsan da'da iskuulka. Laga soo bilaabo ganacsiga iyo dhinacyada bulshada iyo suugaaneed, nolosha caadiga ah waxay leedahay dhammaan qaddiyadaha looga baahan yahay maskaxda si ay u xalliyaan oo ay maskaxduna kor ugu sii mariso marxaladdeeda dhalinyarada. Ma jiro jaaliyad qarsoodi ah oo maskaxdeeda kor u qaadi karta horumarka dabiiciga ah mana awoodin in ay arkaan qarsoodiga dabiiciga ah iyo xallinta dhibaatooyinka nolosha. Qaar ka mid ah ururrada qarsoodiga ah ee dunida ayaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​maskaxda haddii maskaxdu aanay joogsanayn dusha, laakiin waxay geli doontaa macnaha dhabta ah ee waxbarashadooda. Urur noocan oo kale ah waa Amarka Masraxa. Miisaan yar oo ka mid ah fikradaha yar ee ururkan ayaa keena aan ka ahayn ganacsiga ama lacagta bulshada. Xaqiiqda dhabta ah ee calaamadeynta iyo barashada anshaxa iyo barbaarinta waxaa ku dhowaad gabi ahaanba lumay.
Urur qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo faa'iido u leh maskaxda horumarkiisa looma yaqaanno bulsho qarsoodi ah, oo aan la aqoon dunida. Waa inay noqotaa mid fudud oo cad sida nolosha dabiiciga ah. Gelitaanka bulshada sida qarsoodiga ah maaha mid caqli gal ah. Waa koritaan, iyada oo loo marayo dadaal isku mid ah maskaxda. Waa in la koro, aan la galin. Qofna ma maskaxi karo ururkan oo kale haddii uu isku dayo inuu isku dayo inuu sii koro. Marka maskaxdu ay sii korodho aqoonta nololeed ee maskaxda ku haya inay jebiso jaahilnimada adoo ka saara daruuraha, maqnaashaha qarsoodiga ah iyo iftiiminta dhammaan dhibaatooyinka noloshooda iyo in ay ka caawiyaan maskaxaha kale ee horumarinta dabiiciga ah iyo horumarkooda. Iyadoo la tixraacayo bulsho qarsoodi ah kama caawin doonto maskaxda doonaysa in ay korto.
Miyaa suurtagal ah in wax laga helo waxba? Maxay dadku isku dayaan inay wax uun u helaan? Sidee ayay dadku u muuqdaan inay wax waxtar u leeyihiin, inay bixiyaan wixii ay helayaan?
Qof kastaa wuxuu dareensan yahay in qofna uusan wax uun wax u heli karin, iyo in la soo jeedinta ay khaldan tahay iyo isku dayga aan ku habboonayn; Hase yeeshee, marka uu u maleeyo in uu la xidhiidha shay ka mid ah uu rabitaan, xukun fiican ayaa la iska indho-tiraa oo uu dhegaha dhageystaa dhagaysta talada iyo in uu is-dhiibo isagoo aaminsan in ay macquul tahay iyo in he waxa laga yaabaa inay wax uun u helaan. Noloshu waxay u baahan tahay in dib loo celiyo ama xisaabtan loo sameeyo wax kasta oo la helo. Shuruudahan waxay ku saleysan tahay sharciga daruuriga ah, ee bixiya wareegga nolosha, dayactirka qaababka iyo isbeddelka jirka. Qofkii isku daya inuu wax ka helo wax aan horay u imaanin, wuxuu farageliyaa wareegga nolosha iyo qaabeynta foomamka sida waafaqsan sharciga dabiiciga ah, sidaas darteedna wuxuu ka dhigayaa isdabamarin jidhka dabiiciga ah. Wuxuu bixiyaa ciqaabta, dabiiciga ah iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha sharci-dejinta ee ka soo baxa oo la sameeyo si loo soo celiyo wixii uu soo qaatay ama haddii kale waa uu si wada jir ah u xakameynayaa ama laga saaray. Haddii uu diidey arrintan, isaga oo ku doodaya in wixii uu helay uu ahaa oo keliya wixii isaga u iman lahaa oo dhan, doodiisa ayaa ku fashilantay sababtoo ah haddii uu waxba u baahnayn, si muuqata, u iman lahaa isaga oo aan dadaalkiisa, ka dibna uma baahna dadaalka uu sameeyay si uu u helo. Marka arrimuhu yimaadaan mid aan dadaal lahayn, sida waxa loogu yeero shil iyo fursad ama dhaxal ahaan, waxay yimaadaan sababtoo ah iyo sida dabiiciga ah uga shaqeynaya sharciga, sidaas darteedna waa sharci ahaan iyo waafaqsan sharciga. Dhammaan kiisaska kale, sida helitaanka faa'iido muuqda iyo midabeed leh adoo doonaya oo kaliya, ama ku fikiraya oo keliya, ama adoo samaynaya dalabyo sida ku xusan jumladaha loo yaqaanno sharciga badanaanta ama sharciga caqliga, wax macquul ah ma aha in wax laga helo wax inkastoo mid ayaa u muuqda inuu wax uun helo. Mid ka mid ah sababaha ay dadku isku dayaan in ay wax uun u helaan, sababtoo ah inkastoo ay dareensanyihiin in aysan tani si caadi ah u noqon karin, waxay arkeen in dadka kale ay heleen waxa kuwa kale aysan u muuqan inay u shaqeynayeen, iyo sababta oo ah waxaa dadku waxay wax ka qabtaan iyaga oo si fudud u doonaya ama u dalbanaya iyaga oo sheeganaya ilaa ay haystaan. Sababta kale waa sababta oo ah maskaxda qofku aanu si ku filan u qancin oo uu waayo-aragnimo ku filan u ogaado in aysan waxba ka heli karin waxkasta waxkasta oo aan ka ahayn dhammaan caqabadaha, khalkhalka ama iska-horimaadyada ay awoodaan. Sababta kale waa sababta oo ah qofka u maleynaya in uu heli karo waxba wax aan waxba ahayn maahan runta daacad ah. Ganacsiga caadiga ah ee ganacsiyada ugu weyn waa kuwa rumaysan inay ka baxaan sharciga, waxna heli karaan waxba, laakiin taasi waxay tahay inay rabaan inay dadka ka dhigaan kuwo khiyaano badan iyaga oo bixinaya rabitaankooda. Sidaas daraadeed waxay bixiyaan nidaam degdeg ah ama nidaam kale oo ay dadka kale u diidaan inay yihiin kuwo daacad ah laakiin leh waayo-aragnimo yar marka loo eego iyaga. Inta badan kuwa lagu soo galo nidaamka waxaa badanaa muujiya qorshaha sida uu u doonayo inuu helo ugu fiican dad kale oo kale oo sharxaya sida ay sidoo kale u heli karaan dhaqso qani ah. Haddii ay kuwan yihiin daacadnimadoodu ma aha in la galo qorshaha, laakiin, iyada oo rafcaan u ah ciriiriga iyo damaciisa kufsamkiisa iyo hababkiisa khaldan ee caqli-gal ah, qorsheeyuhu wuxuu helayaa waxa dhibbanayaashiisu bixiyaan. Marka qof run ahaantii daacad ah uu ogaado inuusan waxba ka heli karin wax aan waxba ka qaban karin, wuu isku dayi doonaa, inkasta oo uu aqbali karo wixii sharci ahaan u yimaaddo marka ay timaaddo hab dabiici ah.
Dadka hela wax waa inay bixiyaan wixii ay heleen. Haddii dadku helaan waxyaabo u muuqda in ay ka soo baxaan hawada iyo in ay ku dhacaan guntooda sida natiijada ka soo yeerista sharciga ee faragalinta ama dukaanka guud ama sharciga ku salaysan, ama waxa aan ahayn, waxay u eg yihiin gaaban- kuwa indhahoodu arkaan iyada oo aan macnaheedu ahayn kuwa iibsanaya iibsasho deyn ah, oo aan ku dhicin wakhtiga dejinta. Sida kuwa aan haysan dhaqaale ee iibsanaya deyn, mawduucyadani waxay inta badan helayaan waxa ayan dhab ahaantii u baahnayn; sida kuwa iibsadayaasha ah ee aan caqli-gal ahayn, dalbadaha "sharciga ee faransiiska" riyo iyo jaceyl badan ayeey ku sameyn doonaan waxa ay helayaan-laakiin waxay u arkaan inay ku dhow yihiin burburin markii wakhtiga heshiisku yimaado. Deyn lagama yaabo in la aqoonsado, laakiin sharciga ayaa ka dhigaya lacagtiisa. Mid ka mid ah oo ka hadlaya caafimaadka jireed iyo jir ahaaneed isagoo dalbanaya oo dalbanaya "sharciyada faragelinta", ama "ka mid ah", ama wax kasta oo kale, iyo kuwa hela wax ka mid ah waxa uu dalbado, halkii ay si sharci ah uga heli lahaayeen dhulka meesha uu ka tirsan yahay, waa in uu soo celiyaa wixii uu helay iyo dulsaar loo baahnaa isticmaalka.
Mid waxaa laga yaabaa inuu saxo cudurada dareemayaasha oo jidhka ku soo celiyo caafimaad ahaan habdhaqan maskaxeed; laakiin waxaa la ogaan doonaa in xanuunada dareenka ay ku jiraan xaaladaha intooda ugu badan oo ay sii wadaan oo ay sii wado maskaxdii murugada leh. Marka fikradda saxda ah ee maskaxda lagu qaado maskaxda dhibta dareenka ah ayaa la saxay oo jidhku dib u bilaabo shaqooyinka dabiiciga ah. Tani waa daaweyn sharci ah, ama halkii laga kaxeyn lahaa sababo xanuun, sababtoo ah daaweyntu waxay ku dhacdaa iyada oo lagu daaweynayo dhibta ilaha. Laakiin maaha dhammaan cudurada iyo caafimaadka saboolka ah ay sabab u tahay maskaxda dhibta leh. Cudurrada cudurada iyo cudurada waxaa badanaa la keenaa cunista cuntada aan habooneyn iyo raashin xumo iyo rabitaan aan sharci ahayn. Xaaladaha jirka iyo hantida waxaa la siiyaa iyada oo ay u arkaan in ay lagama maarmaan noqoto mid ka mid ah shaqadiisa, ka dibna iyaga oo u shaqeynaya si waafaqsan nidaamka jireed ee la aqoonsan yahay.
Waxaa macquul ah in cuduro keeno quudin aan haboonayn in la baabi'iyo, waxaana suurtogal ah in la helo lacag iyo faa'iido kale oo jireed iyada oo laga codsanayo oo looga dalbanayo erey kasta oo maskaxda ku faraxsantahay in la abuuro ama la korsado. Tani waa macquul, sababtoo ah maskaxdu waxay awood u leedahay inay wax ka qabato maskaxaha kale waxayna u keentaa inay keenaan shuruudaha ay doonayaan iyo sababta oo ah maskaxdu waxay leedahay awooda waxayna awood u leedahay inay wax ka qabato xaalad ee diyaaradeeda, iyo arrintaan soo laabasho ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato ama keenaan xaaladaha dalbaday maskaxda; waxaa suurtogal ah in maskaxdu ay awood u yeelato awoodeeda jidhka waxayna u keentaa cudur jir ahaaneed in la waayo waqti. Laakiin xaalad kasta oo maskaxdu ay ka soo horjeeddo sharciga dabiiciga ah si loo keeno natiijooyin jidheed oo sharcigu u baahan yahay dib-u-hagaajin, iyo dareen-celintu inta badan waa ka daran tahay dhibaatada asalka ah. Marka caafimaadka la sheego iyo marka shuruudaha jireed ee caafimaadka jirka aan la siin, maskaxdu waxay ku qasbanaan kartaa in la waayay koboc aan caafimaad lahayn, sida buro. Laakiin bixinta daaweynta sida muuqata ayaa looga baahan yahay dabiiciga ah ee isku dayaya in ay ka hortagto caddaynta sharciyada. Iyadoo lagu qasbayo kala-soocidda buro, arrinka buraashu waxay noqon kartaa -waxaa marka dadka aan sharciga waafaqsanayn ay qasab ku noqdaan inay ka tagaan farahoodii iyaga oo u maraya dib-u-habeyn iyo caqli-nacayb ah oo lagu raadinayo in ay degaan qayb kale oo ka mid ah beesha, halkaas oo ay waxyeello u geysan doonto way adagtahay in la helo oo la daaweeyo. Marka lagu kala diro maskax ahaan maskaxdu waxaa laga yaabaa inay ka baxdo qayb ka mid ah jirka sida buro iyo dib u muuqato qayb kale oo jidhka ah sida xanuunka neefta ama kansarka.
Marka qofku ku adkaysto oo la siiyo alaab jismi ah isaga oo ka dalbaday "gabi ahaanba" ama "bakhaar-hubin buuxda," wuxuu ku raaxaysan doonaa wakhti maaddaama khamaaruhu uu ku riyaaqayo guulaha uu gaadhay. Laakiin sharcigu wuxuu dalbanayaa inuusan dib u soo celin waxa uu si daacad ah u dhicin, laakiin waa inuu bixiyaa adeegsiga wixii uu lahaa. Lacag bixintan waxaa loogu yeeraa markii uu demeerku dhab ahaantii u shaqeeyay shay la rabay - oo lumay markii uu gaadhay; ama lacag bixinta ayaa la samayn karaa ka dib markii uu helay hantida qaar ka mid ah oo ay lumiso hab aan loo arag; ama waxaa laga yaabaa in laga qaado isaga marka uu dareemayo ugu hubsan iyaga. Dabeecadda waxay u baahan tahay lacag bixinta lacagta ama lacagta u dhiganta deynta.
Marka maskaxdu isku daydo in ay addoon u noqoto jidhka si aan habooneyn, iyo dhillooyinka ay awooddeeda ka soo jiidato diyaaradeeda, shuruucda dunidu waa inay maskaxdeeda ka soo baxdo awoodda. Marka maskaxdu waxay lumisaa awoodeeda, hal ama in badan oo ka mid ah jilitaankoodu waa la qariyey. Lacagta loo baahan yahay sharciga waxaa la sameeyaa marka maskaxdu ay soo wajahday xayiraadda awoodda, dhibaatada iyo dhibaatada ay keento dadka kale helitaanka sheyga rabitaankiisa, iyo marka ay ku dhibtoonayso mugdiga maskaxda ee ay tahay, dadaalada lagu xakamaynayo qaladkooda iyo dib u soo noqoshada maskaxda si ay u diyaar garoobaan. Dadka intooda badan oo u muuqda inay wax uun waxtar u leeyihiin maaha inay sugaan nolol kale oo ay qasab tahay inay bixiso. Lacag bixinta waxaa badanaa loogu yeeraa lana saxay noloshooda. Tani waxay noqon doontaa mid run ah haddii qofku eegi doono taariikhda dadka isku dayay in ay wax uun wax u helaan oo ay u muuqdaan inay guuleysteen. Waxay yihiin denbiilayaal maskaxiyan ah oo isku xidhan xabsiyada dhismadooda.